ပင်မစာမျက်နှာ ဥရောပဘောလုံးပြိုင်ပွဲ စပိန်ဘောလုံးကစားသမားများ Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
LB အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများနေတဲ့ဘောလုံး Genius ၏အပြည့်အဝပုံပြင်တင်ဆက်; '' သင်တန်းနည်းပြ ''။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ analysis ကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝနှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအများအပြား OFF နှင့် on-အသံနည်းနည်းလူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, တိုင်းမိမိအရည်အချင်းများအကြောင်းကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ် Pedro Rodreguez အတ္ထုပ္ပတ္တိအတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောသတ်မှတ်ထားသည်။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမပါဘဲ, Begin ပေးနိုင်ပါတယ်။
Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
Pedro ဧလျေဇာ Rodriguez Ledesma ကသူ့မိခင်, Monserrat Ledesma Encinoso နှင့်ဖခင်, Juan အန်တိုနီယို Rodriguez Pedro အားဖြင့် Santa Cruz က de Tenerife, စပိန်အတွက်ဇူလိုင်လ 28 ၏ 1987th နေ့၌ဖွားမြင်ခဲ့သည်။
Pedro သူ့မိဘ၏တစ်ခုတည်းသောကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ သူပျက်စီးကြောင်းကလေးက type ကိုဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။
Pedro ကောင်းစွာလေ့ကျင့်ခဲ့မိဘများနှင့်အတူအနီးကပ်နှောင်ကြိုးရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျောင်းနှင့်အားကစားများအတွက်ပိုကောင်းတပ်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်ခြင်းငယ်ရွယ်လူကလေးအတွက်အသက်ကိုအဘို့ကြီးစွာသောစတင်ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကသူ့စာအုပ်တွေဖတ်နေနှင့်မိတ်ဆွေများနှင့်အတူဘောလုံးကစားအကြားစုံလင်သောချိန်ခွင်လျှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Pedro ဘောလုံးကွင်းထဲမှာနှောင်းပိုင်းတွင်စတင် (အသက် 16) ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူကပထမဦးဆုံးသူ 2003 မှီတိုင်အောင်ကစားရှိရာစန်း Isidro အကယ်ဒမီပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာသူ့လူငယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း 2004 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။
2004 ခုနှစ်တွင်သူသည်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတယ် FC ဘာစီလိုနာအကယ်ဒမီ။ Pedro ကလပ်မှာရုံးတင်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့နှင့်နောက်မှကာတာလကလပ်အကယ်ဒမီရိုက်ထည့်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူကအကယ်ဒမီမှာမိမိလေ့လာမှုများဆက်လက် 2005 တိုင်အောင်ကလပ်ရဲ့လူငယ်အသင်းများအတွက်ကစားခဲ့ပါတယ်။
သူကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်နှင့်ကလပ်ရဲ့တတိယအသင်းအတွက်နေရာတစ်နေရာကမ်းလှမ်းခံခဲ့ရတယ်အဖြစ်တစ်နှစ် 2005 သူ့ကိုများအတွက်ကောင်းစွာသွားလေ၏။ 2005-2007 အကြား, Pedro Rodriguez တတိယအဖွဲ့ကအဓိကကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
ထိုလုလင်သည်စပိန်ရဲ့အထင်ကြီး display ကိုသူကပိုပြီးဂိုးသွင်းဘယ်မှာ 2007 ကနေစတင်ကလပ်၏ဒုတိယအသင်းများအတွက်ကစားနိုငျခဲ့သညျ။
2009 / 2010 ခုနှစ်, Pedro သာ 2011 ထဲမှာသူ Lionel Messi တို့ကလိုက်ဖက်မယ့်စံချိန်တစ်ခုတည်းတစ်နှစ်ခြောက်ကွဲပြားခြားနားသောကလပ်ပြိုင်ပွဲများတွင်ဂိုးသွင်းဖို့သမိုင်းမှာပထမဦးဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့သည်။
စုစုပေါင်း Pedro 321 ရည်မှန်းချက်များသွင်းယူဘာစီလိုနာရဲ့ပထမဦးဆုံးအသင်းများအတွက် 99 အရာရှိတဦးကဂိမ်း၏စုစုပေါင်းကစားနှင့် (46) 50% ထက်ပိုပြီးအရာတစ်ခုအံ့သြ 25 ကိုကူညီပေးနေပေးမက်ဆီထံသို့သွားလေ၏။
Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
Pedro ရဲ့မိခင် Monserrat Ledesma Encinoso နှင့်အဖေ, Juan အန်တိုနီယို Rodriguez အင်တာနက်အပေါ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအကြောင်းကိုအနည်းငယ်သာသတင်းအချက်အလက်ရှိသည်။
ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ရင်းမြစ်များမှအစီရင်ခံစာသို့သော်သူတို့သဘောသဘာဝ၏မြို့အဖြစ်မှတ် Santa Cruz က de Tenerife လူကြိုက်များ၏ကမ်းရိုးတန်းစပိန်မွို့တှငျနထေိုငျကြောင်းထုတ်ဖေါ်။
သူတို့ကအမှန်ပင်, ပယ်ပေးဆောင်သည့်အကောငျးဆုံးနညျးလမျး၌မိမိတို့သာသားဆောင်ခဲ့သူတို့၏အကောင်းဆုံးအမှုကိုပြုပါတယ်။ Pedro သူ့မိဘများအတွက်သူတို့လိုအပ်တိုင်းတစ်ခုတည်းအရာပေးသည်။
Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Pedro ငျ့မတ်ေတာဘဝကအတုယူခံထိုက်ပေ၏။ သူကတစ်ဦးစာရင်းကိုင်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုထက်5နှစ်ပေါင်းအဟောင်းတွေဖြစ်ဟုအဘယ်သူသည်ကယ်ရိုလိုင်းနားမာတင်နှင့်အတူထွက်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Pedro 17 အခါသူတို့ကတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်ကာရိုလိုင်းနား 22 ဖြစ်ခဲ့သည်။
Pedro Rodriguez သီချင်း Love Story
အခြားကစားသမားမိန်းကလေးမတူဘဲ, Pedro ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ထင်ရှားကျော်ကြားလာခဲ့သည်မှသူ၏ဝေးနေခဲ့တယ်။ နှစ်ဦးစလုံးမေတ္တာတော်ကိုငှက်တို့သည်အလွန်တိုတောင်းသောကိစ္စပြီးနောက်တစ်နှစ် 2005 အတွက်လက်ထပ်တယ်။ အောက်တွင်သူတို့၏ပြည်ထောင်စုဖေါ်ပြခြင်းဓါတ်ပုံဖြစ်ကြသည်။
အောက်တွင် Pedro ရဲ့အလွန်မိတ်ဆွေကောင်းဟောင်းဘာစီလိုနာအသင်းအိမ်ထောင်ဖက်ကပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဌေး Bodega Iniesta စပျစ်ရည်ကိုမျက်မှန်နှင့်အတူစုံတွဲဖြစ်ပါသည်, Andres Iniesta.
သူတို့ကမိမိတို့ကလေးရှိခြင်းမတိုင်မီ 8 နှစ်ပေါင်းအကြောင်းကိုဆက်နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ အဆိုပါစုံတွဲသည် 4th ဧပြီလ 2013 အပေါ်သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးသား, Bryan Rodriguez မာတင်ရှိခဲ့ပါတယ်။
Pedro Rodriguez ရဲ့မိသားစု
ကာရိုလိုင်းနားမာတင်ကအရမ်းမတ်ေတာပါနှင့်သူမ၏ခင်ပွန်း၏အလွန်ကောင်းသောစောင့်ရှောက်မှုကြာပါသည်။ Pedro သူ့ကိုယ်သူမေတ္တာရှိတဲ့ခင်ပွန်းနဲ့သူ့မိသားစုကိုဦးတည်တာဝန်ရှိသည်။ ထို့အပြင်သူသည်မည်သည့်ကိစ္စများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမထားဘူး။ မိမိအ mariage ဘဝအမှန်ပင်အလွန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုဖြစ်ခြင်းသိရသည်။ တဖန်သူတို့သည်အတူတကွလှပသောကြည့်ရှု
Pedro Rodriguez နှင့်ဇနီး, ကာရိုလိုင်းနားမာတင်
သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမေတ္တာ, ယုံကြည်မှုနှင့်အပြန်အလှန်နားလည်မှုပေါ် မူတည်. ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ခွဲခြာသို့မဟုတ်ကွာရှင်းစဉ်းစားဖူးဘူး။ ကာရိုလိုင်းနားမာတင်၏မယားမူသော Daniella Semaan ဖို့ရန်အလွန်နီးကပ် fiend ဖြစ်ဟုဆိုသည်ကြောင်းသတိပြုပါရန်ဆိုင်တဲ့ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ဖာဘရီဂက်စ် ဤဆောင်းပါးကိုရေးသားခြင်း၏အချိန်ကအဖြစ်။
ကလူရိုရဲ့ချောမွေ့စွာအိမ်ထောင်ရေးကြားဆက်ဆံရေးကိုတန်ဖိုးထားသကဲ့သို့, တူညီတဲ့၏ဟုဆိုနိုငျ ဖယ်လ်ကာအို, နီမန် MATIC, မတူပဲ Edinson ကာဗာနီ နှင့် Adriano အဘယ်သူ၏အိမ်ထောင်ရေးဘဝမှာအိမ်ထောင်ရေးမျက်မှောက်ရေးရာနှင့်အငြင်းပွားစရာများနှင့်အတူမှတ်သားသည်။
Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဒေဝါလီခံခြင်းကနေသူ့ငယ်ဘဝကလပ်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်
Pedro ရဲ့ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကလပ်, စန်း Isidro ဖို့ဒရိုရဲ့အပြောင်းအရွေ့ဖို့ဒေဝါလီခံကျေးဇူးတင်စကားထံမှသိမ်းဆည်းထားလိုက်ပြီ ချယ်လ်ဆီး.
Tenerife ကနေစပိန်စတုတ္ထဆင့်အဖွဲ့သည်ဖို့ကစားသမားရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကနေ€ 420,000 တယ် ချယ်လ်ဆီးကျော်လေးဆဟာသူတို့ရဲ့နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက် (€ 85,000) ဖြစ်ပါသည်သောပေါင်းလဒ်။
Pedro စဉ်အင်္ဂလိပ်ပရီးမီးယားလိဂ်အတွက်ချယ်လ်ဆီးအသင်းများအတွက်ကစားရန်အ 10th စပိန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
Pedro Rodriguez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -အစွမ်းသတ္တိနှင့်အားနည်းချက်
သူကကျွမ်းကျင်မှု dribbling အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သူကဒီဂိမ်းအတွက်ဘောလုံးကိုကျော်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောထိန်းချုပ်မှုရှိပါတယ်။ သူကအထင်ကြီးခြင်းနှင့်ရှည်လျားတိုတောင်းသောအကွာအဝေးရိုက်ချက်များများအတွက်အမြန်နှုန်းနှင့် positioning ကိုမှာတန်ဖိုးထားဖြစ်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်သည့်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ခြင်းနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုတယ်။
Thiago Alcantara ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်